Laingo Andriantolofana, mpisehatra politika maneho ny heviny - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanangona Rwat il y a 2 mois
Herintaona katroka izao no nanambaran'ny fitondram-panjakana fa isan'ireo firenena ahitana tranga covid-19 i Gasikara. Herintaona niatrehana ady amin’ny fahavalo tsy hita maso sy tsy azo tsapain-tanana izay tena nanamarika ary mbola manamarika ny fiainan-dRaolombelona. Misy ny ezaka vita fa mbola tena marobe ny tokony hatao raha tsy hilaza afa-tsy ny tosika ilain'ny vahoaka, izay zony tanteraka satria fanampiana nomen'ny mpamatsy sy mpiara-miombon'antoka ho amin'io ady io. Hita taratra eny amin'ny fiarahamonina ny fiakaran'ny tahan'ireo mitondra ny tsimokaretina ankehitriny satria ninia nanadinodino ireo fepetra fiaro fototra ny tsirairay, manao mpitari-bato vilambava ny mpitondra fanjakana. Hany ka samy mizaka ny vokany ny vahoaka tsy mandady harona. Tokana ny teny baiko: " Samia miaro Tena" satria isika ihany no natao hiaro antsika, tsy iandrasana mpitondra fanjakana satria taratra fa toa tsy laharam-pahamehana intsony izany ankehitrio. Arovako ny tenanao, ny fianakaviako, ny asako sy ireo mpiara-miasa amiko, ny fiarahamonina misy ahy mba tsy hiparitahan'ny valan'aretina. Amin'ny fomba ahoana? Fanajana ireo fihetsika fanohana (elanelana iray metatra fara-faha keliny, fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony, fanaovana aron-tava, fihinana sakafo ara-pahasalamana) ny fipariahan'ny valan'aretina, ny fanatonana mpitsabo raha misy tsy metimety na mampanahy. Etsy ankilany kosa ny mpitondra hiara-hiatrika amin'ny vahoaka fa tsy ho tia tena. Hiaro tena aho ho an'ny mpiara-belona amiko sy ho an'ny fireneko.
Hamehana ara-pahasalamana : Ireo fepetra mihatra manomboka ny 3 mey 2021 - il y a 5 jours